Pakistan iyo Afghanistan oo kawadahadalaya weerarkii iskuulka - BBC News Somali
Pakistan iyo Afghanistan oo kawadahadalaya weerarkii iskuulka
Image caption Pakistan waxaa hareeyay murugada ka dhalatay caruurta lalaayay
Taliyaha ciidamada dalka Pakistan, Jeneral Raheel Sharif, ayaa wadahadallo kula leh magaalada Kabul, saraakiisha ciidanka ee Afghanistan, kaddib maalin weerarkii lagu qaaday iskuulka ee Bashwar.
Jeneral Sharif, oo uu wehliyo madaxa ugu sareeya laanta sirdoonka militeriga ee Pakistan, ayaa la filayaa inay Afghanistan kala xaajoodaan sidii ay u wadaagi lahaayeen sirta ku saabsan Taalibaan, ayna u fulin lahaayeen howlgal wadajir ah.
Arrintan ayaa daba socoto, warar shaley lagu baahiyay warbaahinta oo sheegayay in weerarka lagu dilay in kabada 140 ka qof ay soo abaabuleen Taalibaanta Pakistan ee fadhigoodu yahay dalka Afghanistan.
Xilliyadii hore, dalalka Pakistan iyo Afghanistan ayaa isku eedeynayay in xuduudaha u ogolaadeen isugudubka Taalibaan.
Image caption Dadka Pakistan ayaa ka carooday dilka caruurta.
Maanta ayaa Ra’iisul wasaaraha dalka Pakistan, Nawaz Sharif, waxa uu gudoominayay shir ay ka qeybgaleen dhammaan dhinacyada siyaasadda ee dalkaasi, si looga wada xaajoodo qaabka looga jawaabayo xasuuqii shalay ka dhacay Iskuul ee Militariga ay maamulaan oo ku yaalla Peshawar.
Weerarka oo ay qaadeen ururka Talibaan, waxaa ku dhintay in kabadan 140 qof, oo badankooda ay ahaayeen caruur.
Mr Sharif ayaa sidoo kale kor u qaaday ciqaabta dilka ee kiisaska argagixisada, iyadoo ay soo badanayaan baaqa ku saabsan tallaabada laga qaadayo qof kastoo lala xiriiriyo weerarkii shalay.
Pakistan waxa ay hadda galeysaa seddax maalin oo baroordiiq ah. Dalka Hindiyana Iskuulada ayaa laba daqiiqo loo aamusay caruurtii ku dhimatay weerarka.
Waxaa magaalada Peshawar ee dalka Pakistan aas loogu sameeyay qaar ka mid ah dadkii ku dhintay weerarkii ay iskuul magaaladaasi ku yaalla ku qaadeen ururka Taliban-ka Pakistan.
Talibanka Pakistan ayaa sheegay in weerarka ay uga jawaabayeen howlgallo ay ciidammada ka fuliyeen gobollada Waqooyi ee Waziristan iyo Khyber.